अक्सिजन कमी भएको समयमै थाहा नपाउँदा कोरोनाबाट मृत्यु हुने बढे, - NA MediaNA Mediaअक्सिजन कमी भएको समयमै थाहा नपाउँदा कोरोनाबाट मृत्यु हुने बढे, - NA Media
अक्सिजन कमी भएको समयमै थाहा नपाउँदा कोरोनाबाट मृत्यु हुने बढे,
किन निम्तियो यस्तो समस्या ?
शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ९५ देखि १०० प्रतिशतसम्म राम्रो मानिन्छ। कोरोना संक्रमित हुँदा अक्सिजनको स्तर ५० प्रतिशतसम्म झर्दा समेत लक्षण नदेखिने तर, भित्रभित्रै फोक्सोमा खराबी भइसक्ने हुँदा अस्पताल पुर्‍याउँदा पनि ज्यानै जाने जोखिम हुन्छ
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट डा. अनुप बास्तोलालाई मंगलबार राति काठमाडौंका एक स्थानीयको फोन आयो। उनले ४२ वर्षीया आफ्ना आफन्तलाई एक्कासी सास फेर्न गाह्रो भएको बताए। उनको कोरोना परीक्षण भएको थिएन। डा. बास्तोलाले तुरुन्तै अस्पताल लैजान सल्लाह दिए। तर, त्यसको केही बेरमा नै ती व्यक्तिको मृत्यु भएको डा.बास्तोलाले जानकारी पाए।
पछिल्ला दिनमा मुलुकभर कोरोना परीक्षण नगरेका तर, लक्षण भएका बिरामीको ठूलो संख्या घरैमा छन्। कोरोना परीक्षण नगरेका मात्र होइन परीक्षण गरेर घरमै आइसोलेसनमा बसिरहेका बिरामीहरुमा पनि यो समस्या देखिएको चिकित्सकहरु बताउँछन्। तीमध्ये कतिपयको सास फेर्न कठिन भएपछि अस्पताल लैजान ढिला हुँदा ज्यानै गएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिइरहेका भेरी अस्पतालका कन्सल्ट्यान्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. पारस पाण्डे पनि पछिल्ला दिनमा यसरी मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको बताउँछन्।
शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ९५ देखि १०० प्रतिशतसम्म राम्रो मानिन्छ। कोरोनाबाहेक अरु रोग लाग्दा अक्सिजनको मात्रा कम भयो भने सास फेर्न कठिन हुन्छ। कोरोना संक्रमित हुँदा अक्सिजनको स्तर ५० प्रतिशतमा झरे पनि कुनै लक्षण नदेखिने तर, भित्रभित्रै फोक्सोमा खराबी हुने हुन्छ।
शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ९५ देखि १०० प्रतिशतसम्म राम्रो मानिन्छ। कोरोनाबाहेक अरु रोग लाग्दा अक्सिजनको मात्रा कम भयो भने सास फेर्न कठिन हुन्छ। कोरोना संक्रमित हुँदा अक्सिजनको स्तर ५० प्रतिशतमा झरे पनि कुनै लक्षण नदेखिने तर, भित्रभित्रै फोक्सोमा खराबी हुने हुन्छ। डा. पाण्डेका अनुसार यसलाई साइलेन्ट हाइपोक्सिया भनिन्छ।
यस्तो वेला संक्रमित ढिला गरी अस्पताल पुगेमा उपचार गर्न कठिन हुने र ज्यान जाने जोखिम हुन्छ। त्यसैले होम आइसोलेसनमा बसिरहेका बिरामीहरुको ‘पल्स अक्सिमिटर’ उपकरणमार्फत नियमित अक्सिजन स्तर जाँच्नुपर्छ।
“छातीको एक्सरे वा अक्सिजनको स्तर जाँच गरियो भने समयमा अक्सिजनको मात्रा थाहा हुन्छ र समयमा उपचार पाएपछि अहिले निम्तिएको जोखिम कम गर्न सकिन्छ” डा. पाण्डे भन्छन्, “त्यसैले कोरोना संक्रमण भएका तथा संक्रमण नभएका तर, दीर्घ रोग भएका र वृद्धवृद्धाको घरमै अनिवार्य रुपमा अक्सिजन नाप्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ।” कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरुको संख्या बढ्न थालेपछि अब अक्सिजन थेरापीसहितको होम आइसोलेसन बनाउन चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मंगलबारसम्ममा मुलुकभर २८ हजार २०७ जना संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा छन्। मंगलबारको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट १७ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै तीन हजार ११२ जनाको परीक्षण गर्दा ५०२ जना संक्रमित भेटिएका छन्। मंगलबारसम्ममा ३१८ जनाको आईसीयूमा र ३८ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो समय संक्रमितहरुको संख्या कम देखिए पनि मृत्यु हुनेहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी आउन सकेको छैन।
मन्त्रालयकै २९ कात्तिकको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १३ जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। यसको तीन दिनअघि २६ कात्तिकमा पछिल्लो २४ घण्टामा २६ जनाको ज्यान गएको थियो। त्यस वेला एकैदिन २ हजार ५६९ जना संक्रमित भेटिएका थिए।
मंगलबारसम्ममा कोरोना संक्रमणबाट एक हजार २४७ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेका वेला स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले कोरोना परीक्षण र कट्याक्ट ट्रेसिङभन्दा संक्रमितको उपचारका लागि पूर्वाधार बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको र त्यसै अनुसार काम भइरहेको बताएका छन्।
पहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा कोरोना परीक्षण हुन्थ्याे। अहिले सरकारले नै बेहोश हुने अवस्था आए वा श्वासप्रश्वासमा समस्या भए मात्र अस्पताल आउन भनेको छ। विज्ञहरुले मन्त्रालयको यस्तै अव्यावहारिक र गलत नीतिनियमका कारण नागरिकको ज्यान धरापमा परेको बताउँछन्। २८ कात्तिकमा हिमालखबरसँग कुरा गर्दै गण्डकीको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद विन्दु शर्माले संघीय मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङभन्दा पनि होम आइसोलेसनलाई व्यवस्थित गर्ने, ‘हाई फ्लो’ अक्सिजनसहितको संरचना बनाउने र अस्पतालमा बेडको व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको बताएका थिए। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार लक्षण देखिएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गरिरहेको पनि बताएका थिए।
तर, टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालका प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट डा. बास्तोला अझै पनि परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन्। “अब वडाहरुले होम आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको विवरण राख्ने, घरमा आइसोलेसनमा बसिरहेकालाई कसरी अस्पताल पठाउने भनेर आवश्यक तयारी गर्ने र परीक्षण तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि सँगैसँगै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ”, डा. बस्तोला भन्छन्।
उनका अनुसार अहिले निमोनिया भएर अस्पताल आउने संक्रमितहरु बढिरहेका छन्। घरमा आइसोलेसनमा बसिरहेका संक्रमितको स्थानीय तहले नियमन नगर्ने र संक्रमित व्यक्ति आवश्यक होशियारी नअपनाएका कारण एक्कासी सिकिस्त भएर ज्यान गुमाउनु परेको उनको भनाइ छ। “धेरै व्यक्तिहरु घरमै बसिरहेका बेला सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर अस्पताल आउन थालेका छन्” डा. बास्तोला भन्छन्, “यसरी सिकिस्त बनेर अस्पताल आउनेहरुमा दशैँपछि वृद्धवृद्धाको संख्या बढी छ।”
उनका अनुसार सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो जस्ता कोरोना लक्षण देखिंदा पनि परीक्षण नगरेको कारण सास फेर्न एक्कासी कठिन भएर सिकिस्त भएपछि मात्र अस्पताल आउने गरेका छन्। त्यसैले वडाहरुले घरमै बसिरहेका संक्रमितको निगरानी राखेर सिकिस्त बनेमा तत्काल उपचारका लागि राम्रो बन्दोबस्त मिलाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
भेरी अस्पतालका एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. पाण्डेका अनुसार पछिल्लो समय धेरै संक्रमित अक्सिजनको स्तर कम भएपछि मात्र अस्पताल आउने गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षण देखिएपछि कोरोना परीक्षण गर्ने निर्देशिका बनाएको छ। संक्रमितको संख्या बढेपछि अस्पतालमा बेडको अभाव हुन थालेको छ।
पहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा कोरोना परीक्षण हुन्थ्याे। अहिले सरकारले नै बेहोश हुने अवस्था आए वा श्वासप्रश्वासमा समस्या भए मात्र अस्पताल आउन भनेको छ। विज्ञहरुले मन्त्रालयको यस्तै अव्यावहारिक र गलत नीतिनियमका कारण नागरिकको ज्यान धरापमा परेको बताउँछन्।
कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र पीसीआरमार्फत कोरोना परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मले परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेका कारण अहिले संक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ। जसका कारण संक्रमित सिकिस्त भए वा नभएको थाहा पाउन अक्सिजनको स्तर जाँच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गएको २ कात्तिकमा सरकारी र निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालामार्फत परीक्षण र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्न नसक्ने भन्दै व्यक्ति आफैंले खर्च व्यहोर्नुपर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसयता परीक्षण र अस्पतालमा उपचार गर्न जानेको संख्यामा कमी आयो। सरकारको उक्त निर्णयको चर्को विरोध भएपछि मन्त्रालयले त्यसलाई सच्याउँदै २८ कात्तिकदेखि सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमार्फत निःशुल्क परीक्षण हुने जनाएको छ।
हिमाल खबर साभार
अक्सिजनको समस्या ९५ प्रतिशत समाधान, दैनिक दश टन लिक्विड आयात
कोरोनाबाट आज ९ हजार २ सय बढीमा संक्रमण,२ सय १४ जनाको मृत्यु
प्रहरी कार्यालयको छेउमै तस्करको गोदाम